I-A3 flatbed uv golf ball iphrinta China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-A3 ye-Golf Ball,I-Vv ye-Golf Ball Printer,Iphrinta yeGalofu yeGolf
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yeGolf > I-A3 flatbed uv golf ball iphrinta
I-A3 flatbed uv golf ball iphrinta ngumkhiqizo wethu omusha kunomshini wethu. I-A3 Golf Ball Printer yakhiwa ngokucushwa kwezimboni njengephrofayli ye-aluminium ye-thicken, uhlelo lokupholisa amanzi, 75W ngokuzenzekelayo ithola uhlelo lwe-UV Ukuphulukisa ... 6 umbala ne-max. 16 isiphakamiso sokuprinta. Ungaphrinta efonini, izinto ze-cylinder, ibhola legolfu namabhodlela. Umkhiqizo onomphumela omuhle wokunyathelisa we-3D ..
I-Uv Golf Ball Printer I- Jet Direct I-UV yephrinta ye-UV ihle kakhulu ekunyatheliseni ngebhola legalofu eliqediwe. Inqubo yokunyathelisa i-UV izokhiqiza umbala obala futhi opaque omhlophe, ngisho nakuzo zonke izinhlobo zegolfu.
Izici ezizuzayo zethu Iphrinta yeGalofu yeGolf :
Ihlakaniphile: 1. I- panel yokusebenza elula ingalawula i-flatbed ye-Backward, i-Foward, i-Up, i-Down, i-Pause / Stop, i-Online / i-Offline ne-inki ishintsha, ukuze ikuvumele ukuthi usebenzise i-Digital Certification nge-Glass Ceramic;
2. Iphrinta yebhola yegalofu inomklamo wokugcina isikhala ukuvumela ikhasimende ukuthi libeke umshini ekamelweni elincane. I-Outlook yephrinta ephathekayo ene-design free dust. Umklamo omusha unciphisa umthelela wezemvelo kumishini.
3. I- A3 i-UV P ishintshela e-china ingathola imiphumela ephezulu yokunyathelisa emiphakathini emihle emsakazweni omnyama futhi olula ngokunyathelisa kwe-ink inkinobho nombala.
Iphrinta ye-UV ephepheni Okuhle kakhulu: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwa kokushicilela okuphumayo + umphumela omuhle + womsebenzisi-friendly
Izigaba zomkhiqizo : Iphrinta ye-UV > Iphrinta yeGolf
Iphrinta ye-A3 ye-Golf Ball I-Vv ye-Golf Ball Printer Iphrinta yeGalofu yeGolf Iphrinta ye-A3 ye-Cake Iphrinta ye-A3 ye-UV UV Iphrinta ye-3d ye-Chocolate Iphrinta ye-A4 yekhofi Iphrinta ye-Dtg ye-wholesale